नेपाल बैंकले बैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने - नेपालबहस
नेपाल बैंकले बैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने
| ११:१०:५२ मा प्रकाशित
२० बैशाख, काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले वार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा सो ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भएको हो।
बैंकले बैशाख २२ गतेदेखि ‘८.५० प्रतिशत नेपाल बैंक ऋणपत्र–२०८७’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो। सो ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष रहनेछ।
कति कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्दै ?
बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ३५ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेको हो। सोमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको १४ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ भने बाँकी २१ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ।
सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरिने ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ७० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएकोमा १५ हजार कित्ता बाँडफाँट गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी १३ लाख ८५ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सो ऋणपत्र खरिदका लागि छिटोमा बैशाख २६ गतेसम्ममा आवेदन दिनु पर्नेछ। सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि जेठ ५ गतेसम्म लम्बिनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ३ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
बिक्री प्रबन्धक को हो ?
बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले सी आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट सो ऋणपत्र खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
कुन रेटिङ्ग प्राप्त गरेको छ ?
ऋणपत्र निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले बैंकलाई कम क्रेडिट रिस्क जनाउने इक्राएनपी आईआर सिङ्गल ए ग्रेडिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने तथा कर्जा जोखिम न्यून भएको संस्था हो भन्ने जनाउँछ।
आजदेखि नेपाल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिन सकिने, ब्याजदर कति ? २ हप्ता पहिले
नेपाल बैंकको मुनाफा १३.३१ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानीमा गिरावट ३ हप्ता पहिले
नेपाल बैंकको ऋणपत्र बैशाख गतेदेखि २६ गतेदेखि भर्न सकिने, ब्याज कति ? ३ हप्ता पहिले
नेपाल बैंकले बैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने ४ हप्ता पहिले
नेपाल बैंकको बोनस तथा हकप्रद शेयर नेप्सेमा सूचीकृत १ महिना पहिले
प्रधानमन्त्रीको सपथ बदरको मुद्धा प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाई गर्दै २ मिनेट पहिले
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ६ घण्टामा ४ संक्रमितको मृत्यु ३ मिनेट पहिले
टोखालाई ३ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग ७ मिनेट पहिले
संसदबाट नीति कार्यक्रम पास नुहुने र वैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने देखियो: भट्टराई २० मिनेट पहिले
कर्णालीमा एक करोड राशिको पत्रकार कल्याण कोष २३ मिनेट पहिले
पाँचथरमा जेठ १७ गतेसम्म निषेधाज्ञा ३१ मिनेट पहिले
पाँचथरका गाउँभरि ज्वरोका बिरामी,अधिकांशमा संक्रमण ४२ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट जनस्वास्थ्यकर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको ज्यान गयाे १ घण्टा पहिले
उपनिर्वाचनमा संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र, कर्मचारीलाई पीपीई ! १ घण्टा पहिले
विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! १ घण्टा पहिले
निर्धन उत्थानले बिहीबारदेखि संस्थापक शेयर लिलामी बिक्री गर्ने, शेयरमूल्य कति ? २ घण्टा पहिले
भेन्टिलेर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश १४ घण्टा पहिले
तेह्र भूमिहीन भूकम्पपीडितलाई लालपुर्जा २० घण्टा पहिले
राजधानीमै इन्टरनेटको पैसा तिरेको बिल पाउँदैनन् ग्राहक १७ घण्टा पहिले
कोभिड र बजेट अभावको मारमा हुलाकी राजमार्ग २० घण्टा पहिले
निषेधाज्ञामा सुनसान देखिएको मातातीर्थ मन्दिर ७ दिन पहिले
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक पक्राउ २ दिन पहिले
संक्रमण नियन्त्रणका लागि रसुवामा पनि निषेधाज्ञा ७ दिन पहिले
बहुमतको सरकार गठन गर्ने ओलीको प्रयास, खनाल–नेपाल पक्षमा विवाद ७ दिन पहिले
निषेधाज्ञामा निशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गर्दै युवा ४ दिन पहिले
आज दिउँसो मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना ५ दिन पहिले
प्रदेश सरकारको सहयोगमा १५ खानेपानी आयोजना सम्पन्न ७ दिन पहिले
जसपाकाे बालकुमारीमा कुनै बैठक नडाकिएको ठाकुरकाे दाबी ३ दिन पहिले
ओलीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिन नसक्ने २ हप्ता पहिले
दमौली अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरसहितको आइसोलेसन कक्ष तयार २ हप्ता पहिले
२५ बोरा सुर्तीसहित ट्रक चालक पक्राउ २ हप्ता पहिले
पन्ध्र दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न मन्त्रालयको आग्रह ५ दिन पहिले
ओलीकाे दाऊ निर्वाचनतिरः खनाल–नेपाल धर्मसंकटमा, २७ गते एमाले विभाजनको छिनोफानो हुने २ हप्ता पहिले
नवनिर्मित पाटन माध्यमिक विद्यालय भवन उद्घाटन ४ हप्ता पहिले
निजी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने सरकारी निर्देशन हावादारी: अध्यक्ष बसन्त चौधरी ५ दिन पहिले
४३ दिनमा तीन हजार नाध्यो महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य, आज पनि सर्किट लेवलमा कारोबार ३ हप्ता पहिले
रानीघाटमा प्रहरी चौकी निर्माण, स्थानियवासी खुशी १० महिना पहिले
जनता बैंकले पास गर्यो मर्जरको प्रस्ताव, शेयरधनीलाई १२ प्रतिशतको लाभांश १ वर्ष पहिले
तोकियो २८ स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर र मापदण्ड ११ महिना पहिले
गृहमन्त्रीको पनि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ ९ महिना पहिले